Iwo mamaneja emukati. Tsananguro pfupi | Linux Vakapindwa muropa
Zvemukati mamaneja ndiyo mhinduro yakanakisa yekuve nekuvapo pawebhu kana kutanga mapurojekiti umo vanhu vakasiyana vanofanirwa kutaurirana kuburikidza neInternet. Kunyangwe vamwe vavo vachida WordPress o Drupal inozivikanwa kwazvo, iyo yakavhurika sosi yenyika inotipa zvimwe zvakawanda sarudzo yatichataura nezvayo mune inotevera chinyorwa.
Ngatitangei nekutsanangura izvo zvirimo mamaneja
1 Kubatsira kwemaneja zvemukati
2 Inguvai yekushandisa zvemaneja maneja?
Kubatsira kwemaneja zvemukati
Kugadzira webhusaiti kuri nyore. Kugadzira webhusaiti ine vashanyi kwakaoma.
Iwe unofanirwa kufunga nezve dhizaini dhizaini, kuenderana nemidziyo yakasiyana uye izvo injini dzekutsvaga "senge". Inofanirwawo kuitiswa kuti iwanikwe nevanhu vane hurema uye vanoona nemotokari uye, kana zvirimo zvemultimedia zvakabatanidzwa, kunzwa. Chekupedzisira, zvese izvi zvinofanirwa kushandurwa kuita kodhi mirairo.
Ipapo kunouya zvirimo. Iwe unofanirwa kusarudza mamwe mazwi akakosha iwe aunofunga anogona kumutsa kufarira kune vangangoite vateereri uye nyora zvinyorwa zvinosanganisira izvozvo zvakakwana nguva, asi kwete zvakanyanya kuitira kuti injini yekutsvaga algorithm isarudze kuti iri kushandiswa.
Uye, ngatirege kukanganwa kutevedzera zvirevo zvemunyika zvakavanzika.
Mukuita, kuita zvese izvi kwaizoda mumwe kana anopfuura mahunyanzvi. Zvinoitwa nemaneja zvemukati tichizvisunungura pachedu kubva pakugadzira uye kukodha mabasa anotibvumira kutarisa pane zvemukati. Chaizvoizvo isu tinongofanirwa kuzviisa kuseva, zadza imwe dhata, sarudza iyo yakajeka graph uye isu tinogona ikozvino kuzvipira isu kunyorera zvinyorwa.
Panyaya yevanonyanya kufarirwa mamaneja emukati, vazhinji vanopa vanotipa vanopa kare zvirongwa zvavakaisirwa uye ivo ndivo vanochengeta iwo matsva.
Inguvai yekushandisa zvemaneja maneja?
Iwe unofanirwa kugara uchifunga izvozvo zvemukati mamaneja ipfungwa yakajairwa. Tinoreva tchero chishandiso chinobvumidza kupatsanura maitiro ekuwedzera zvemukati pawebhu kubva pane peji dhizaini maitiro. Sezvo peji rega rega risingafungidzike kuve nemarongero aro, kugara uchinyora iwo iwo kodhi mirairo hakunyatso kushanda. Ndokureva kuti kunyangwe isu tichisarudza Kune saiti yakanyorwa kubva pakutanga, iwe ungangodaro uchishandisa zvemukati manejimendi system zvakare.
Saka ngatishandurei mubvunzo kuti Ndeipi kuti tishandise yakafanogadzirirwa zvemaneja maneja?
Munyika yakanaka, zviri nani kuhaya hunyanzvi webhu dhizaini, programmer, uye zvemukati munyori. Wobva watenga chirongwa chakanaka chekutambira uye isa mari zhinji mukushambadzira kweinjini dzekutsvaga uye pasocial network. Asi, tinoziva kuti izvi hazvingamboiti.
Zvemaneja mamaneja haasi akanyanya kunaka; yakakwana kwazvo Vanoda zviwanikwa zvakawanda kuti vamhanye uye vauye nezvinhu zvaungangodaro usingazomboshandisa. Ivo havasunungurwe kubva kumatambudziko ekuchengetedza futi.
Iyo yekupedzisira ndakazviona munyama yangu; Makore apfuura ini ndakaisa pamwechete webhusaiti kune bhizinesi neimwe yeanonyanya kuzivikanwa kana ichangobatanidzwa kubva kune imwe chirongwa. Ivo vaive nechengetedzo bhagi iyo mumwe munhu akashandisa pane yangu peji kubisa Bank of America vatengi. Ini ndakazopedzisira ndato chinja domain kutanga uye kurasikirwa nemutengi gare gare. Handitumidze zita nekuti vakagadzirisa iro dambudziko makore apfuura uye havana kukundikana zvine njodzi zvakare. Zvisinei, ini handina kuzomboshandisa maneja wemukati zvakare.
Asi, kunyangwe asiri iwo akanyanya kunaka ivo vakakwana zvakakwana. Ndokusaka yakawanda yewebhu inoshandisa ino sisitimu.
Kupokana kunowanzoitwa nevazhinji, panguva ino, ndosaka uchinetseka kuva newebsite kana pasocial network dziripo. Zvinenge zvakati fananei nekushamisika kuti sei uchitenga tsvimbo yehove kana chinokwezva hove iri chirauro uye chirauro.
Takataura nguva refu yapfuura muLinuxAddict nezve chii Zvakaitika kuCollegeHumor. Ivo vaivimba nekufarirwa kweFacebook kugovera zvinyorwa zvavo, asi Facebook yakafunga kushandura mitemo yemutambo iyo yavakazopedzisira varasikirwa nevateveri vavo vese, vachiisa chikamu chikuru chevashandi vavo uye vachitengesa zvakaderera pane zvaive zvave yakatengwa.
Masocial network anobatsira kwazvo kukwezva vashanyi, asi ndiwo mawebhusaiti anovachengeta nesu chero paine ruzivo rwekuvashanyira rwakakosha. Uye neakavhurika sosi yemukati mamaneja atichakurukura mune inotevera chinyorwa, kuchipa zviri nyore kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iwo mamaneja emukati. Tsananguro pfupi
Yo Ini ndinogadzira mawebhusaiti ndichishandisa iyo WordPress yezvinyorwa maneja, kutanga nekuti ini ndinofunga kuti vatengi vangu vanozoona zviri nyore kugadzirisazve webhusaiti yavo vega vasingatenderi kune vechitatu mapato uyezve nekuti ini ndoda kureruka kana ndichigadzira webhu nemaneja uyu